I-Semalt Ichaze Igalelo I-Ajuster I-Stratégie De Férencement À Niches Spécifiques
Akukho mntu unomlinganiselo wokubambisana kwi-domain ye-reprerencement, kufuneka ufune "SEO" okanye "ukuthengiswa kwezinto" kunye nezigidi zeempendulo kunye neziphumo zeenkampani kunye nabantu ababethelela la visibility. I-avantage de servir i-créneau non conventional okanye iyingqungquthela kukuba nguwe ongekho mncintiswano, kodwa unokwenza uxhomekeke kuluntu kunye ne resources pour vous aide à réussir. Ungayifumana njani icomputer kwi-niches uniques kunye nokuphucula amathuba okufumana i-SEO?
uJack Miller, umphathi we-réussite client iSemalt , isahlulo leseluleko esiyisebenzisayo esiza kukunika i-campagne de referencement gagnante.
Ngaphambi kokukhethiweyo, qhafaza ufunde kwaye uqonde i-auditedire yakho. Uyakwazi ukuqala nge-study study market, kodwa ufune ukudibanisa ulwazi olufunekayo lwabathengi bakho, i-preferences kunye neziqhelo zokufumana iziqulatho. Cela uncedo kuwe kwi-riddle des clichés phezu kwendlela abantu abazenza ngayo iinguqulelo, unika i-raccourci vers un meilleur matériel qui vous rendra plus approprié pour les besoins de votre auditoire - free logo maker online.
Sebenzisa iibrasi kwixesha elide
Ulungelelwano oluthile uqale uqalise le-mot-clé kwixesha elide le-uned que vous comprenez comment comment vos audience veulent les informations ou les produits dans votre niche. Iimpapasho ze-Hummingbird ne-Panda deGoogle ziye zaba nefuthe elibi kwi-keyword-clés, kodwa i-mots-clés kwi-longue queue fonction continue pour pour les uniques uniques. Xa ufuna ukugxila kwi-keywords enikezelayo kunye ne-trace, sebenzisa iziqendu kwi-queue longueue, kungukuthi umbuzo umbuzo kunye neempendulo, yizona ziphumo eziphambili ezithengisa ii-unique uniques.
Iimpawu ezivela kuqala kuphela
Xa ufuna ukuvula ii-idées zezinye, fumana iimpawu ezivela kwimvelaphi. Uyakwenza le nto ibe yimpumelelo kwi-search kwaye ufumane imibuzo engayifumananga nayo. Cela usebenzise i-intanethi kunye ne-marque à la grandeur..
Inkqubela isithuba sokutsala i-editedurs hors site
Ukuze uhlaziye iinguqulelo zakho zophando kunye ne-autorité de domain, wena unyanzelekile ukuba ungene kwii-lien inxaxheba ngokubanzi njengoko imiyalezo axes sur des créneaux. Cela usho ukuba u-devre travaille ne les éditesurs. Uyakwazi ukubhala i-content enenxalenye efanelekileyo yokuthulula i-yourtete-kodwa le content ifanele isetyenziswe kwi-public de votre éditeur. Le ntshukumo ingaba unyanzelekile ukuba wenze i-compromise, kodwa izixhumanisi zakho ziza kukunyusa ukufumaneka kwakho.
Ukufunda zakho iziganeko
Xa ufuna i-essayer de rivaliser kunye nalabo abaye kwi-domain efanayo nawe, qhafaza kunye nabo kwaye bafunde oko babenza ngokungafaniyo kunye ne-non-part of your ideas. Akukho nengozi apha ngenxa yokuba u-niche is petite and you ne serez pas forced.
Ngenxa yokuba ungayifuni nesebenzisa i-campagne de référencement, qala u-petit. Sebenzisa amagama ambalwa kwi-imeyli etempilweni ye-content phambi kwakho. Cela uncedo ukufumana ulwazi oluza kubaluleka xa usukhulu.
Sebenzisa ii-social media ngoba yiyona nto ihamba phambili ukuba abantu bafumane. Les médias sociaux ziphinde zilungele indawo yokuthucula i-visibilité phambi kwakho ukugxila kwi-classements de search. Il you helpera aussi à vous connecting avec les influences, à syndiquer votre contenu et à améliorer vos résultats.
I-Creer une communauté site
Cela uyenze ngokusebenzisa iforum community where users use connecting les uns to others. Cela ukhuthaze un plus grande fidélité et vous ufumane uncedo lokufumana into entsha.
Ukunikezela kokuqukethwe jikelele
Dlulisa i-affair de meilleur relation avec vos éditeurs conventionnels, vous devez proposer des contenus. Uyakwenza le nto ngokudibanisa iiblogs zakho phantsi kwee-sections, kodwa ungayifuni kwi-blogs de niche. Cela ubeke i-public plus enkulu kunye ne-partagera yakho content.